ဒဿမတန်းသင်ရိုးပါ Sex education သင်ခန်းစာအချို့ ပြန်သုံးသပ်သွားဖို့ရှိ
ဒဿမတန်းသင်ရိုးပါ Sex education သင်ခန်းစာအချို့ ပြန...
22 พ.ค. 2563 - 15:11 น.
အများပြည်သူကြား ဝေဖန်အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒဿမတန်း(Grade 12)ရဲ့ ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာဘာသာရပ်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ သင်ခန်းစာအချို့ကို ပြည်သူ့အသံ နားထောင်ပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းက ဒီကနေ့ မေ ၂၂ ရက်နေ့ နေပြည်တော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။
ပြည်သူအကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမယ့် ဒီသင်ခန်းစာပါသင်ရိုးကို ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပြီးမှသာ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမှ အချိန်ယူရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
' ' ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတင်မကဘူး မူလတန်းကစပြီး ရောဂါကာကွယ်နေထိုင်တတ်အောင် သူ့အရွယ်နဲ့ အလိုက် မဖြစ်ခင်ကကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နေထိုင်တတ်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး သင်ကြားတာဖြစ်တယ်။ အထူး သဖြင့် grade 12 ကလေးတွေကိုအောင်သွားစေချင်တယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် ကျောင်းထွက်ပြီး အိမ်ထောင် ကျသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင် သူ့ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရရင် ဆရာမသင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ပြဿနာ တွေကို ဖြေရှင်းတတ်အောင် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချတတ်အောင် အသက်အရွယ်၊ အတန်းအလိုက် လိုအပ်တာတွေကို ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။'' လို့ သင်ရိုးညွှန်းတန်းဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဌေးဌေးဝင်းက သင်ကြားရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
စာမတတ်ဘဲ ကျောင်းဆရာ ၁၇နှစ်လုပ်ခဲ့သူ
ဒသမတန်းသင်ရိုးထဲက ထွန်းထွန်းနဲ့ ချိုချို
ဒီလို မျိုးဆက်ပွားအသိပညာပေးသင်ခန်းစာတွေတင်မက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာ ကွယ်ရေးသင်ခန်းစာတွေ၊ အမှိုက်စနစ်တကျစွန့်ပစ်နိုင်ရေး၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်း စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကအစ အတန်းအလိုက်ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာဌေးဌေးဝင်းက ပြောပါတယ်။
သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထွန်းထွန်းနဲ့ချိုချိုဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာဟာ မျိုးဆက်ပွားဆိုင်ရာ ပညာပေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားပေးဖို့ ကျောင်းသားမိဘတွေကြား လက်ခံလိုသူ လက်မခံလိုသူဆိုပြီး သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Sex Education ဆိုတာဘာလဲ
' 'Sex Education ဆိုတာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ထိတွေ့စပ်ယှက်မှုတွေကို သင်ကြား ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝအလျှောက်တတ်သိလာမယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်သိမှုကို ပညာဉာဏ်နဲ့ ချွန်းအုပ်ပြီး ဘာတွေဆောင်ရမလဲ ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတာ သိတတ်အောင် သင်ကြားပေးတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကလေးတွေကို နားလည်တတ်စအရွယ်ကစပြီး အသက်အရွယ်အလိုက်သင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။''လို့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်က ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီ Sex Education ဆိုတဲ့ထဲမှာ ကလေးငယ်တွေဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ private part သူများမထိရမကိုင်ရ မယ့်နေရာတွေသိအောင်ပြောပြထားရမယ်၊ မိဘမဟုတ်တဲ့သူတွေက လာကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ရင် ငြင်းဆန် ရမယ် (N0) ထွက်ပြေးရမယ် (Go)၊ ကိုယ်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူကိုပြန်ပြောပြတတ်ရမယ် တိုင်တတ်ရ မယ် (tell)ဒီလောက်အဆင့်ကိုသင်ပေးထားရမယ်။
လူပျိုအပျိုဖော်ဝင်လာတဲ့ အရွယ်ဆိုရင်လည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲ လာတယ်၊ ဆန့်ကျင်လက်လိင်နဲ့ထိတွေ့ရင် ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ၊ နောက် မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တာတွေ၊ ရောဂါကူးစက်နိုင်တာတွေ ဒါတွေကို သင်ကြားပြောပြထားမှ အန္တာရယ်တွေကို မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သူကရှင်းပြပါတယ်။
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အသိပညာပေး သင်ခန်းစာတွေပါတဲ့ သင်ထောက်ကူ စာအုပ်
မိဘအများစုကတော့ ဒါဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုကြသလို အဓိကစိုးရိမ်ကြတာကတော့ ကလေးငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းမှုတွေ၊ လွဲမှားတဲ့အသိရပြီး စမ်းသပ်ချင် လာအောင် အသိဖွင့်လိုက်တာတွေဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။
' ' ကျွန်မကတော့ ဒါကပေးသင့်တဲ့ပညာပေးလို့လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေးတဲ့နေရာမှာ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်မဟုတ်ဘဲ ဆိုးကျိုးတွေအရင်ပေးပြီးမှ ဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သေချာပေးဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆတယ်။''လို့ ကလေးမိခင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မရှင်ငြိမ်းမယ်ကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။
ဒါအပြင် သူဟာ ခိုကိုးရာမဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို အဓိကကူညီပေးနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တာကြောင့် သူကူညီခဲ့တဲ့သက်တမ်း၆နှစ်အတွင်းကြုံရတဲ့ သက်ငယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအကြောင်း ကိုလည်း အခုလိုပြောပြပါတယ်။
' 'အများစုက ၅တန်း ၆တန်းကျောင်းသူလေးတွေ။ သူတို့ဆိုရင် ဘာ sex education မှ မသိတော့ ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်လို့လုပ်နေမှန်းမသိဘူး။ ငြင်းဆန်ရကောင်းမှန်း အမေကို ပြန်တိုင်ရ မှန်းမသိကြဘူး။ သူတို့ဗိုက်ကြီးတာကိုလည်း ဆရာမတွေကပဲသိပြီး မိဘနဲ့အတူဆရာမတွေပါလာပြီး အကူညီတောင်းကြတာ။ ဒါကြောင့် ကျေးလက်တွေမှာ ဒီအတွက် အသိပညာပေးတာက ပိုပြီးလုပ်ရမှာ။ ကျောင်းသားတွေတင်မကဘူး။ မိဘတွေကိုပါပေးဖို့လိုတယ်။''လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဆရာ၊မိဘပူးပေါင်းမှသာ ကလေးငယ်တွေကို လိင်မှုရေးရာအသိပညာကို မှန်ကန်တဲ့အသိရအောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှသာ သက်ငယ်မုဒိန်းတွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ သေဆုံးမှုတွေ၊ မွေးကင်းစစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေ ဒါတွေ ပပျောက်လာမှာလို့ မရှင်ငြိမ်းမယ်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒဿမတန်းသင်ရိုးပါ Sex education သင်ခန်းစာအချို့ ပြန်သုံးသပ်သွားဖို့ရှိ